गुणस्तरहीन स्यानिटाइजरले जोखिमः साबुनपानी नै ‘हितकर’ « रिपोर्टर्स नेपाल
गुणस्तरहीन स्यानिटाइजरले जोखिमः साबुनपानी नै ‘हितकर’
प्रकाशित मिति : 2020 September 14, 6:40 am
काठमाडौं, २९ भाद्र । धेरैजसो अवस्थामा हातबाटै भाइरस संक्रमण हुन्छ। आफू होस् या अरूमा। त्यही हातलाई संक्रमणरहित बनाउन घसिने स्यानिटाइजर गुणस्तरहीन मेथानल मिश्रित रहेछ भने के होला ? त्यसमाथि बच्चाको हातमा पर्‍यो भने ? यो जिज्ञासामा चिकित्सकहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्।
वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्ले मेथानल मिश्रित स्यानिटाइजर खरिद गरेको भए तत्काल फ्याँक्न सल्लाह दिन्छन्। ‘मेथानल विषाक्त हो। बच्चाबच्चीको कमलो छालामा बारम्बार घस्दा विषाक्त रसायन छालाले सोस्छ। त्यसले दीर्घकालमा दृष्टि क्षमतामा असर गर्छ। मुखमा परे ज्यानसमेत जान्छ’, डा। काफ्ले भन्छन्, ‘साबुनपानीले मिचीमिची हात धुनु जत्तिको राम्रो अरू केही होइन।’
कोरोना त्रासका कारण पटक–पटक स्यानिटाइजर दल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। वरिष्ठ मनोचिकित्सक डा. अनन्त अधिकारीका अनुसार, पटकपटक स्यानिटाइजर घस्नु पनि मानसिक समस्या हो। यसलाई अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर ओसीडी भनिन्छ। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकाशन गरेको छ ।
काठमाडौँ,२७ जेठ । बिपी राजमार्गअन्तर्गत महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास नगरपालिका–३ मा गए राति मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर
काठमाडौँ,२७ जेठ । बेलौरी नगरपाालिका–८, कलकत्ताका किसान करमसिंह रानाले तयार गरेको उन्नत जातका केराको नर्सरी